Lithology: ihe ọ bụ, ihe ọ na-amụ, njirimara na mkpa | Network Meteorology
Geology nwere ọtụtụ alaka nke na-eme ka ọmụmụ ihe dị omimi dị omimi. Otu n'ime alaka geology bu ihe omumu. Ọ bụ sayensị na-amụ banyere okwute, gụnyere mbido, afọ, ihe mebere ya, usoro ya na nkesa ya na ụwa niile. Ngalaba sayensị a sitere na oge ochie, nke malitere site na onyinye dị iche iche site na ịgbara mmiri nke China na Arab, n'etiti obodo ndị ọzọ. A na-amara onyinye nke akụkụ ọdịda anyanwụ nke ụwa nke ndị Aristotle na onye na-eso ụzọ ya bụ Theophrastus nke ọma na ọrụ ya Na nkume.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara na mkpa lithology niile.
1 Njirimara nke lithology
2 Lithology na ụdị okwute
2.1 Nkume nzuzu
2.2 Sedimentary nkume
2.3 Metamorphic nkume
Njirimara nke lithology
Lithology bụ ịdọ aka ná ntị na-ekewa nkume site n'ọmụmụ nke ma ihe onwunwe ma ahụike. A na-ekewa ha dịka usoro ndị na-esi ebute nkume. Dabere na nke a, e guzobere ya na ụdị isi atọ: igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Ọ bụ ezie na a na-ahụkarị okwu lithology na petrology na ihe ndị ọzọ, enwere ndị na-eme esemokwu aghụghọ. Iji maa atụ, mgbe anyị na-ekwu maka lithology anyị anaghị ekwu maka mmụta maka ngwakọta nke nkume nwere aria kọwaa. Nke ahụ bụ, anyị were mpaghara wee mụọ ụdị okwute dị na mpaghara ahụ.
N'aka nke ọzọ, A na-egbochi Petrology n'ọmụmụ banyere ụdị nkume ọ bụla ọ bụla. Dị ka ndị na-atụle okwu dị iche iche si kwuo, ịmụ usoro nke nkume ndị na-egosi na ọ dịghị onye ọ bụla bụ ihe ọ bụla bụ ihe ọmụmụ. Agbanyeghị, ịmụ teknụzụ dị n'ime okwute bụ teknụzụ. Ọ bụ ezie na a na-ewere ha abụọ dịka otu, ha na-ekpuchi akụkụ ndị a niile.
Ihe omumu nke lithology bu ihe anahu anya na aru aru nke nkume. A na-ejikwa usoro ihe ọmụmụ iji mụọ nchịkọta ihe nchịkọta nke ọ bụla. Ya mere, a na-etinye ọmụmụ banyere kemịkal na ihe omimi. Ebumnuche ma ọ bụ otu esi ahazi ihe ndị ahụ n'etiti onwe ha bụkwa ihe a na-amụ na lithology.
Lithology na ụdị okwute
Anyị maara na a na-achọta okwute n'ime ala ụwa ma kesaa ya dị ka usoro si mee ka ọ pụta. Nke a na - akpata ụdị okwute atọ nwere ike ịdị: nke na-asọ oyi, nke na-edozi ahụ, na nke ọma. Anyị ga-akọwapụta ụdị nkume dị iche iche a na-amụ na lithology.
Ha bụ ndị etolitere n'ihi nhọpụta na n'ọtụtụ magma. Magma bụ ihe a wụrụ awụ nke mebere akwa ụwa. Ihe ndị a abụghị naanị nkume a wụrụ awụ nwere gas na mmiri. A na-ahụ Magma na nnukwu ogbu ma na-arịgo n'elu n'ihi nsị na-efe efe na mgbawa ugwu mgbawa. Mgbe magma a pụta n’elu ala, ọ na-efunahụ ikuku, ọ ga-ajụkwa oyi ruo mgbe ọ ga-adị na nkume ndị na-enwu ọkụ. Calleddị a na-akpọ ụdị nkume a mgbawa ugwu.
Magma nwere ike jiri nwayọ sie ike n'etiti etiti miri emi ma mepụta nkume dị egwu. Nkume ndị a na-etolite nwayọ nwayọ. A na-akpọ ha nkume ndị dị egwu ebe ọ bụ na a na-ewere ha dị ka mbido dị egwu. adị ụdị abụọ nke igneous igneous dị ka ihe ha mejupụtara. Acid igneous rocks bụ ndị na-etolite site na oke silica ma nwee quartz na obere ígwè na magnesium. N'aka nke ọzọ, nkume ndị bụ isi bụ ndị nwere obere silica na enweghị quartz, mana ha nwere magnesium na iron n'ụba.
Ha bụ ndị a kpụworo site na sedimenti nke edebere n'elu ụwa ma si na mbuze nke nkume ndị dị ugbu a. A na-akpọkwa ha okwute nke oke mbido, ebe ọ bụ na e sitere na ihe ndị dị n'elu ala mebere ha. Mepụta ọtụtụ nkume ndị a nwere ihe sitere n'okike. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ okwute ndị mejupụtara seashells dị elu na calcium ma na-etolite nkume calcareous. Sediments bụ ihe ọ bụla karịa ịnweta ahụ na-emepụta na usoro nke mbuze nke ẹdude nkume na. Nke ahụ bụ ịsị, Sedimentary nkume bụ nkume na-akpụ site na nkume ndị dị ugbu a site na usoro a maara dị ka sedimentation.
A na-ewepụta ihe ndị na-eme nkume sedimentary site na njikọ mmiri, mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ, ikuku, ikpuru, na ntinye. Nke a pụtara na sedimenti niile edebere mgbe usoro usoro ihe omimi niile na-akpụ akwa n'elu akwa akwa na-edetu ndị dị ala ruo mgbe ha mepụtara nkume. Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, usoro a na-ewe ọtụtụ nde afọ. Mgbe ọtụtụ nde afọ gasịrị, ọ ga-enwe ike ịmachi ma dozie usoro nke sedimenti. Ihe mkpuchi ahụ na-agbakọta ebe ọ bụ na nrụgide sitere na ịdị arọ nke ọkwa dị elu na-arụ ọrụ. Ọnọdụ okpomọkụ dị elu nke a na-eme na ịgọnahụ ihe ndị a na-arụ na-ewere ọnọdụ na e guzobere nkume sedimentary.
Ọ bụ mmegharị ahụ tectonic na-eme ka nkume ndị a gbagoro n'elu. N'aka nke ọzọ, ha bụkwa akụkụ nke sedimenti nke na-etolite nkume ndị a, ọ bụghị ihe ndị ọzọ dị ndụ dị ka shells na carbon carbon. A na-ejikarị ụdị nkume ndị a nwekwara ihe ndị ọzọ dị ndụ. Nke ahụ bụ, na nkume na-egosi n'ígwé ma ọ bụ strata. Ihe atụ nke nkume sedimentary kachasị mara amara ha bụ nzuzu yana mkpokoro ndị ọzọ, ájá na ala.
Ha bụ ndị etolitere site n'ụdị abụọ nke usoro gara aga. Usoro ndị a dị n'ime ala ma ọ bụ karịa. Ha bụ nkume ndị e guzobere na-adabere n'ụkpụrụ sedimenti nke e doro nnukwu nrụgide na okpomọkụ dị elu. Enwekwara ihe nke magma gas nke a na - emeputa metamorphosis miri emi. Ka anyị lee otu ihe atụ nke ya. Otu ụdị kọntaktị metamorphism bụ mgbe magma na-agwakọta elu ahụ na-abanye na nkume dị elu. A na kọntaktị na-eme ka gas na okpomọkụ na-ebute site ná.
Na dislocation metamorphism ọ bụkwa ọzọ variant. N'okwu a, enwere nrụgide na sedimentary ma ọ bụ igneous nkume n'ihi mmegharị nke tectonic plate. Nrụgide a nke na-etinye n'oké nkume ahụ mechaa ghọọ nkume metamorphic.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere lithology na ihe ọ na-amụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Akwụkwọ akụkọ